Abbootiin seera Oromoo fi Dhaabilee siyyasa Oromoo gorsi kalatin keeneme!!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAbbootiin seera Oromoo fi Dhaabilee siyyasa Oromoo gorsi kalatin keeneme!!!
Labsiin yeeroo mudama seeran ala Wallaga fi Gujii keessati waga 1 Walka adeemsifama Yakka duguga sanyii baleesu Abiyi Ahmed akka himachisuu Ogeeson International Criminal Court (ICC) raga ba’aa jiru. Labsiin mudama Paarlmaan hin ragasifamin ummata Wallaka biyya tokko ta’uu irrati goodhamuun yakka 1faa dha, Labsii paarlamaati hin mirkana’ii kana humana waraana hin to’atamnen uumata yeeroo dheeraf waga 2 ajeesisisuu, reebsisuuf himata malee hiidhan diraruun qoofa isaati Abiyin mana murtii adunya akka dhaabuu akkeekamee jira,
Raggan UN fi ICC qaqaba jiru akka ibsuti Mootummaan Abiyi Ahmed reepheelola baleesuuf lola jira utuu hin tane eegerree lammii Wallaga fi Gujii baleesuuf yaadamee kan deema jiru ta’uun ragaan Wallaga irra dhiyyacha jiru ibseerea Abbootiin Seera Oromoo fi Dhabbileen siyyasa Oromoo Atataman koree dhoksan dhimmaa kana qooratuu ulagalee UN fi ICC barbadan akka qoophefatan gorsan jiru dabalatan stratagic genocide deemsifama jirua jeedhame jalati Fayya uumata Wallaga Midhama jiruchuu, Suummi gosii isaa hin beekamnee Mana barumsa Gidami, Begi, Qodala fi Innangoo irrati, Beshan Manasibu irrati rawwatamee, Oggeesoon fayyala Komandi post ari’ataman maneen yaalaa, maneen qoorcha heedhun cufamuu, Barsisoon fi hayyuuleen dandeeti qaban komandi post hidhamuu, ari’atamuu fi ajeefamun irra kan ka’ee barsisoon cicimoon hundi nannoo gadii dhisan adeemuu irra kan ka’ee fi komandi post mana barumsa seene ta’ee jeedhe barumsa jeeqa waaan ture fi jiruuf baratoon Wallaga fi Gujii mana barumsa heedu keessati University galuu hin dandeenye kun General Punishment against the nation himata ICC dhiyachu danda’uu keessa tokko jeedhameera.
ABO fi Akktvistoon Oromoo bara 2009 iyyata isaan UN Geneva fi ICC dhiyefatan fi kan ama adeema jiru Genocide bara dheera Oromoo irrati rawwatama jiru xuumuura itti goochun ni danda’ama Ethiopian yakkaa Yugoslavian rawwate caalaa rawata jirti jeedhameera.
Waan kun qindoominan Odeefannoo bakka hundati walti qabamaan fi Abbootii seeran qinda’ee ulagaleen bareefamee dhiyachun mootummaa kana ICC dhayachun dirqama ta’aa
Balinan fuluma kana irrati itti fufnan